Al-Shabaab oo dib ula wareegtay gacan ku heynta Bacaadweyn | KEYDMEDIA ONLINE
Al-Shabaab oo dib ula wareegtay gacan ku heynta Bacaadweyn
Sheegashooyinikii Wasiirka Amniga Galmudug ayaa beenoobay, kadib markii Al-Shabaab ay dib ula wareegeen degaannadii shalay lagu dagaallamay.
BACAADWEYN, Soomaaliya - Kooxda Al-Shabaab ayaa dib ula wareegtay gacan ku heynta magaalada Bacaadweyn iyo guud ahaan degaannadii ay shalay tageen Ciidanka Xoogga Dalka iyo kuwa Galmudug, kadib markii kuwii ugu danbeeyay ay ka baxeen saaka.
Degaannada Bacaadweyn, Sabeenno gawrac iyo Qeycad, oo shalay ay tageen ciidamada DF iyo Daraawiishta Galmudug, ayaa hadda dib ugu laabtay gacanta Al-Shabaab, waxayna goob fagaaro ah ku soo bandhigeenn sawirrada meydad dhalinyaro tuute xiran oo ay u sheegeen in ay ka tirsanaayeen Ciidamada Galmudug.
Wasiirka warfaafinta Galmudug, Falagle, oo warbaahinta la hadlay, wuxuu gabi ahaanba inkiray in wax dagaal ah shalay ka dhacay Mudug, halka Wasiirka Amniga Maamulka Axmed Macalin Fiqi, uu sheegay in Ciidamadu la wareegeen guud ahaan goobihii ay u ruuqaansadeen.
Dhanka kale Al-Shabaab waxa ay sheegteen in ay ku dhawaad 70 askari ku dileen dagaalladii shalay, gaadiid ku gubeen isla markaana ay dib ula wareegeen degaannadii ay hore uga baxeen.
Sawirrada Al-Shabaab soo bandhigeen waxaa ka muuqda, sawirro ay ku soo galeen goobtii ay shalay ka soo muuqdeen ciidamada Dowladda, markii ay tageen Bacaadweyn, waxayna taasi beenineysaa waraysiyadii ay bixiyeen Wasiirrada Amniga iyo Warfaafinta Galmudug.
Dadka degaanku waxay ay xaqiijiyeen in Ciidamadii Dowladda ay fariisin ka sameysteen degaanka Dhaghaye, oo qiyaastii 30 KM u jirta magaalada Bacaaddweyn.
Howlgalkii ay qaadeen Ciidamada Galmudug iyo kuwa Dowladda ee ku sugan degaannada maamulka, ayaa u muuqda mid si guud u fashilmay, sababayna khasaaro hor leh.